रिकन्डिसन व्यवसायी दुईसय प्रतिशत वढि कर तिर्न बाध्य:: Artha Dabali
रिकन्डिसन व्यवसायी दुईसय प्रतिशत वढि कर तिर्न बाध्य
रमेश कोइराला, अध्यक्ष, नेपाल रिकन्डिसन व्यवसायी संघ
आर्थिक वर्ष ०७५/ ७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिकवर्ष समाप्त हुनासाथ शत प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोप्रति नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघले आपत्ती जनाएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र राजस्व तिर्न बाँकी भएका व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन साधनको कारोबार गरिरहेका व्यवसायी हरुलाई समेत गम्भीर असर पुग्ने संघले जनाएकोे छ ।
साउन १ देखि लागु हुने गरी प्रदेश सभा राजपत्रको सि.नं. १७६ को खण्ड (घ) मा जरिवना सम्बन्धी महलमा ‘त्यसपछि सो आर्थिक वर्ष नाघेमा ५ वर्ष सम्म दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । कुनै पूर्व जानकारी विनै एकै पटक ल्याइएको सो प्रावधानप्रति नेपाल अटोमोबाइल रिकन्डिसन व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रस्तुत छ यस विषयमा नेपाल रिकन्डिसन व्यावसायी संघका अध्यक्ष तथा आर.के. अटो सेन्टरका प्रमुख रमेश कोइरालासंग अर्थ डवलीको लागि तारा वाग्लेले गरेको गरेको कुराकानीको सार :
अहिले अटो रिकन्डिसन व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीको खास माग के हो ?
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र ७६ को राजस्व तिर्न बाँकी भएमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनासाथ शतप्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेको प्रति नेपाल रिकन्डिसन व्यवसायी संघको आपत्ती छ । यस व्यवस्थाले तोकिएको अवधिभित्र राजस्वतिर्न बाँकी भएका व्यक्तिगत सवारी धनीका साथै रिकन्डिसन साधनको कारोबार गरिरहेका व्यसायीहरुलाई समेत गम्भीर असर पुगेको छ । सरकारले गतअर्थिक वर्षमा पुरै कर नतिरेको भए राजस्वमा शतप्रतिशतथप गरी कर तिनुपर्ने भनेको भएपनि २०० प्रतिशत थप तिनुपर्ने अवस्था छ किनभने सवारी मर्मत विलबुक नविकरणका जस्ता प्रकृया पुरा गर्दा हामीले २०० प्रतिशत फाइन तिनुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले यसको शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका छौं । सरकारलाई भेटेर आफ्नो मागका बारेमा वार्ता पनि गरिरहेका छौं ।
हालसम्म आफ्ना पुरा गराउन हालसम्म संघले के के गर्यो ?
संघले यस सम्बन्धमा प्रदेश ३ मा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवसायीहरुसँग प्रशस्तै संख्यामा पुराना बाइकहरु भएका र कतिपयको राजस्वतिर्न बाँकीभएको अवस्थामा एकै पटक धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । संघले साविकको व्यवस्थामा म्याद समाप्तभएको मितिले ९० दिनभित्र जरिवाना छुट भएकोमा सो व्यवस्था हटाई म्याद समाप्तहुनु अगावै नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले आम प्रयोगकर्ताहरुमा व्यावहारिक कठिनाई समेत हुने भएकाले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नकालागि समेत अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी हालको परिवर्तित व्यवस्थामा रङको स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश ३ को हेटौंडा कार्यालयबाट नै गर्नुपर्ने भन्ने रहेको र कुलकारोबारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार काठमाडौंबाट नै भइरहेको अवस्थामा भौगोलिक दुरीकाकारण थप कठिनाई हुने र लागत समेत बढ्ने भएकाले सम्बन्धित कार्यालयबाट नै सेवाप्रदानगर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।
मागप्रति सरकारको सम्बोधन कस्तो छ ?
सरकारले हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । छिटै हाम्रा माग संवोधनगर्ने भनेको छ । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन पनि अहिलेको लागि स्थगित भएको छ । हामीले कर, विलवुक नविकरण, जरीवना जस्ता विभिन्न विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु हुदैन भन्ने माग राखेका थियौं । त्यस्तै हामीले सडकको अवस्था आकासे पुल, जेव्राक्रसिङ लगायतका विषयमा कस्ता व्यवस्था लागू हुनुपथ्यो भनेर ४६ बुँदे सुझाव र मागपनि पेस गरेका छौं । सरकारले यस्ता मुद्दामा छलफल गर्ने भनेको छ ।
अहिले रिकन्डिसन अटोमोवाइल क्षेत्रको व्यवसाय कस्तो छ ?
सरकारले नयाँ सवारी खरिद गर्दा ५० प्रतिशतलोन को व्यवस्था गरे पछि ग्राहकहरु नयाँ सवारी प्रति आर्कषित हुन थालेका छन् । कतिपय उपभोत्ताले पुराना वेचेर नयाँ किन्छन भने कतिपयले पुरानालाई नयाँ जस्तै बनाएका सवारी किन्छन । ५० प्रतिशत लोनको व्यवस्थाले रिकन्डसनका सवारीको खरिद विक्री दुवैमा असर परेको छ । रिकन्डिसन सवरीको व्यापारमा मन्दी आएको छ ।
पुराना सवारीलाई नयाँ जस्तै टिकाउ राख्न चालकले कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
पुराना सवारीलाई पनिनयाँ जस्तै बनाएर बेच्ने हुँदा नयाँ साधन जत्तिकै टिकाउ हुन्छन् । त्यस्ता सवारीको कार्यक्षमता पनि नयाँको भन्दा कम हुदैन । साधानलाई कत्तिको दिगो बनाउने भन्ने चालकमा भर पर्छ । समय समयमा मर्मत गर्ने, चलाउँदा साधानको पार्टपुर्जाको अवस्थाको वारेमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । हमीले पनि ग्राहकलाई यही कुरा बुझाएर विक्रीगर्ने गरेका छौं ।